Rag hubeysan oo dhowr arday ah ka afduubtay kuleej ku yaalla gobolka waqooyiga Nigeria | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Rag hubeysan oo dhowr arday ah ka afduubtay kuleej ku yaalla gobolka...
Rag hubeysan oo dhowr arday ah ka afduubtay kuleej ku yaalla gobolka waqooyiga Nigeria
Goobjoogayaasha ayaa sheegay in markii uu milatarigu yimid kuleejka, ay kuwii weerarka soo qaaday iska tageen. Haatan ciidamada oo taangiyaal iyo helikobtarro wata ayaa lagu daad gureeyay aagga si ay isugu dayaan badbaadinta dadka la afduubtay.
Previous articleMadaxweyne Ahmed Madoobe oo Dalbaday in Amniga Shirka ay sugaan Ciidamada Nabad Ilaalinta Midoowga Afrika
Next articleKumannaan carruur reer Sirilanka ah oo dadka korsada la siiyey qaarkood waxaa lagu iibiyey xaruumaha carruurta lagu kala iibsado
. Dowladda Qatar ayaa beenisay inay jiraan lacago ay Soomaaliya usoo mariso Agaasimaha Hay’adda Nabad-Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya (NISA) Fahad Yaasiin. Eedayntaas ayaa ku jirtay...
Ra iisal wasare Rooble oo xal u raadinayo Mahadi Guileyd iyo...
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo ugu baaqay Mareykanka inay...